आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस् ।
स्वास्थ्य : आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौंचु’रोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फो’क्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चु’रोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ ।
घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दु’ग्धजन्य पदा’र्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने दुग्ध’जन्य पदार्थको सेवनले गर्दा फोक्सोमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई बाहिर फाल्न शरीरलाई गाह्रो पर्छ ।
घरेलु विधि प्रयोग गर्ने तरीकाः
१. यो विधि सुरु गर्दाको पहिलो दिनमा सुत्नु अगाडि ज’डिबुटीबाट बनेको चिया खानुहोस् । यस्तो चिया खानाले पेटमा भएका र कब्जि’यतको कारक बनेका विषाक्त तत्वहरु नाश हुन्छन् जसले गर्दा फो’क्सोलाई आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
२. दोश्रो दिनमा बिहानको खाना खानुपूर्व दुईवटा कागतीलाई तातो पानीमा मिसाएर खानुहोस् । त्यसपछि ३०० मिली भुँ’इकटहर वा अंगुरको जुस खानुहोस् । किनभने यसमा प्राकृतिक एन्टीअ’क्सिडेन्ट हुन्छ जसले श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई सहयोग गर्दछ ।
४.दिउँसो खाना खानुसँगै पोटा’सियम भएको जुस ४०० मिली पिउनुहोस् किनभने पोटा’सियममा विषाक्त तत्व फाल्ने क्षमता हुन्छ । यसका लागि आँप, केरा, सुन्तला, मेवा जस्ता फलफूलको जुस सेवन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अनि बेलुका सुत्नु अगाडि ४०० मिली अल्छाको जुस पिउनुहोस् र यसले गर्दा फोक्सोमा संक्र’मण गरेका ब्याक्टे’रिया मर्ने गर्दछन् ।
५‍. यस बाहेक तातो पानीले २० मिनेट नुहाउँदा यो विधि अझै प्रभावकारी हुन्छ । तातो पानीले नुहाउँदा फोक्सोमा भएका वि’षाक्त पदा’र्थ बाहिर निस्कन्छन् । यस बाहेक मसलाको तेल मिसाएको तातो पानीको बाफ लिं’दा अझ राम्रो हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्गा’ईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुन्छ: रुसी वैज्ञानिकको निश्क’र्षस्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुस’न्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको को’लेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटु’रोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ ।
रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोध’र्मी कणको प्र’भाव न’ष्ट गर्ने क्ष’मता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनुभयो । सन् २०१२ मा अमेरि’कन हर्ट एशोसिएशनले स्थानीय गाईको दही सेवन गर्नाले उच्च रक्तचा’पका रोगीमा ३१ प्रतिशतले कमी आएको तथ्य सार्वजनिक ।
२०७८ बैशाख २५, शनिबार १७:२९ गते 1 Minute 621 Views
बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा हुने फाइदाहरु जान्नुहोस ।
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? नखानुहोस् टमाटर, हुन्छ अल्सरको ख-तरा !